Izixhobo zokuPhucula ukuPhucula abaYili | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Zininzi izinto ezisikhuthazayo inyathelo lethu xa kusiziwa kuyilo, ukuba kunzima ukugxila. Ukusukela izilingo ezingapheliyo ukusuka ekubambezeleni ukuya kwimisebenzi emininzi kwiiprojekthi ezahlukeneyo ezisiphambukisayo. Ezi ziphazamiso ziye zithintele umsebenzi wethu kunye noxinzelelo. Ngesi sizathu, sihlala sifeza umsebenzi ongasonelanga. kwaye iyasiphazamisa.
Sonke sinokuphazamiseka kwethu, nokuba ngaba i-imeyile rhoqo kunye nezilumkiso zosasazo loluntu okanye ukungabikho kwenkuthazo. Muninzi lwezixhobo eziphambili zolawulo zibandakanya imisebenzi yokuphucula imveliso yethuKodwa akukho sisombululo silingana nesayizi enye.
Ngamanye amaxesha sidinga into ethile kwingxaki yethu. Funda ezi zixhobo zilandelayo kwaye usebenzise ezona ucinga ukuba zilunge kakhulu. Ayizizo zonke ezinako kwaye ezingafanele kusisebenzela.
2 Akukho ziphazamiso, iNkululeko
3 Lawula imisebenzi yakho ngoVuno
4 I-imeyile ngeSpark
5 Indawo enemveliso ngakumbi neNoizio
Isixhobo endisithandayo. Ukuba ungomnye wabo baphazamiseka ngokulula njengam, yisebenzise. NgeMomentum ungagxila kulo msebenzi uwufuna ngokwenene, ngaphandle kokunye. Faka ulwandiso kwisikhangeli sakho kwaye uvule ithebhu entsha. Bhalisa umsebenzisi wakho omtsha kwaye ucofe ibha ukuze ubhale umsebenzi owulindileyo. Kulula njengokuba ufunda xa uvula ithebhu entsha uyakuhlala uwukhumbula umsebenzi omlindileyo. Ke, impembelelo yakho yokuqala ayizukuvula iithebhu zembali, uvula le unayo kwiscreen.
Ngokufanelekileyo, i-Momentum isekwe "kwimikhwa", kwaye ungacwangcisa izikhumbuzo, iinjongo, kunye neeshedyuli, kunye neebheji ezibonisa ukuba zingaphi imikhwa oshiye ukuyigqiba ngalo mhla. Ngalo lonke ixesha ugqibezela umkhwa ngaphandle kweziphazamiso, 'ikhonkco' likhula ixesha elide, umdlalo owongezelelweyo onamandla ukukhuthaza.
Akukho ziphazamiso, iNkululeko
NjengoMama, iNkululeko ikwenza uvelise ngakumbi ngokususa iziphazamiso. Kule meko, iNkululeko sisixhobo esibi ngakumbi. Ngokusisiseko, ibhloka iisayithi kunye neeapps ezikuthintelayo ekubeni uvelise.
Isebenza kuzo zonke iifomathi, iselfowuni (i-iOS okanye i-Android) kunye nekhompyuter (iPC okanye iMac). Ke iyakuthintela ekubeni ujonge 'ngokukhawuleza' kwi-Instagram kwiselfowuni yakho.
Lawula imisebenzi yakho ngoVuno
Ngelixa inani lezixhobo ezilapha ngasentla zijolise ekulawuleni okanye ekuthinteleni izinto owaziyo ukuba ziyaphazamisa, awunakuhlala uzazi ukuba ziyintoni, okanye ngekhe ukwazi ukuvuma ukuba uchitha ixesha elingakanani kwizinto ezithile.
Kwimeko apho, ufuna ulwandiso lwesikhangeli njengoVuna. Isikhangeli sexesha esilula, sikunika ingxelo ethembekileyo nengathintelwanga malunga ngqo nokutya ixesha lakho kwi-intanethi, ukuze wenze okuthile ngako.
Ezinye iindlela ezifanayo zibandakanya RescueTime , ebaleka ngasemva kwaye ihlalutye ipesenti yexesha olichitha kwiiwebhusayithi ezithile kunye nemisebenzi, kwaye ibonelele 'ngemveliso' yemihla ngemihla esekwe kwimisebenzi yakho.
I-imeyile yeyona nto iphazamisayonjengoko zihlala zinxulumene nomsebenzi ukuze zingaziva ngathi zikubekela amangomso, kodwa azisoloko zingxamisekile, nokuba ziziva ngathi zinjalo ngelo xesha.
Uninzi lubhalise kwithiyori yokuba ii-imeyile kufuneka ziqinisekiswe kwaye ziphendulwe ngamaxesha athile osuku, Ukunika uninzi lwexesha lakho ukugxila kwiiprojekthi. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukubhalisa, isixhobo esinjengeSpark sinokukunceda.
Spark iyaqonda ukuba zeziphi ii-imeyile zakho ezibaluleke kakhulu kwaye uzihambisa phezulu kuluhlu. Inbox ye-Inbox yayo ibeka yonke into ngokobuqu, Izaziso kunye neeleta zeendaba, kwaye ikwazisa kuphela xa kukho into. Umsebenzi wokukhangela onomdla ugcina nexesha.
Indawo enemveliso ngakumbi neNoizio
Iziphumo zesandi kumanqanaba ethu oxinzelelo kunye nemveliso zinokuba nkulu. Ezinye izandi ziyacaphukisa, ezinye zinokusinceda sigxile. Esi sisiseko esasemva kukaNoizio, ozibiza ngokuba "liqabane lakhe elinobuqili." UNoizio ubonelela nje uluhlu lwezandi zangasemva zokunceda ukwandisa imveliso yakho kunye nokuvimba ezinye izandi ezicaphukisayo eziqhuba ngoku uphambene kwaye ucothise inkqubo yakho. Izandi ezikhoyo zibandakanya ikofu ephumayo okanye isandi samaza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Izixhobo zokuvelisa abaqulunqi